လိင်သုတေသနအတွက်ရုပ်ရှင်ရွေးချယ်ခြင်း - လိင်ရွေးချယ်မှုနှင့်ပတ်သက်သောလိင်ကွဲပြားမှုတွင်လိင်ကွဲပြားမှု (၂၀၀၃) - Your Brain On Porn
Arch လိင်ပြုမူနေ။ 2003 Jun;32(3):243-51.
Janssen E ကို1, လက်သမား: D, ဂရေဟမ်, CA.
ဤလေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာယောက်ျားမိန်းမတို့အဘို့မိမိတို့ differential ကိုအယူခံဝင်ဘို့ကိုရှေးခယျြခဲ့ခေါ်ဆောင်သွားရုပ်ရှင်မှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန့်ပြန်ကျားမကွဲပြားမှုကိုစူးစမ်းဖို့ဖြစ်တယ်။ တစ်ဦးကအလယ်တန်းရည်မှန်းချက်လိင်စိတ်နိုးထသြဇာလွှမ်းမိုးနှင့်ဤ variable တွေကိုယောက်ျားနှင့်မိန်းမတို့အဘို့ကွာခြားခြင်းရှိမရှိလေ့လာစူးစမ်းကြောင်း variable တွေကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ဖို့ဖြစ်တယ်။ တဆယ်လူတို့သညျ (က M အသက်အရွယ် = 26 yrs) နှင့် 17 အမျိုးသမီးတွေ (M အသက်အရွယ် = 24 yrs) အမျိုးသမီးခဲ့ကြသည်နှင့်အခြားတစ်ဝက်အထီး-ရွေးချယ်ထားသည့်တဝက်သောလိင်ကွဲ interaction ကသရုပ်ဖော်ထားတဲ့ 20 ရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုအပိုင်းများနှင့်အတူတင်ပြခဲ့ကြသည်, ထိုကလစ်ပ်ဘယ်လောက်ရှိသလဲဖို့တောင်းခဲ့သည် ရှုထောင့်တစ်ဦးအရေအတွက်ကိုပေါ်မှာ။ ယေဘုယျယောက်ျားရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုအပိုင်းများကိုပိုပြီးလိင်အမြိုးသမီးမြားကိုပြု၏ထက်နှိုးဆွသောတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ arousal အတွက်ကျားမကွဲပြားခြားနားမှုအထီး-ရွေးချယ်ထားသည့်ဗီဒီယိုအပိုင်းများကိုအဘို့အမျိုးသမီး-ရွေးချယ်ထားသည့်ဗီဒီယိုအပိုင်းများကိုအဘို့အမှုမရှိခြင်းကိုပေမယ့်သိသိသာသာခဲ့ကြသည်.
ထို့အပြင်အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများသည်မိမိတို့၏လိင်ကွဲပြားမှုအတွက်ရွေးချယ်ထားသောဗီဒီယိုများကိုလိင်စိတ်နှိုးဆွမှုမြင့်မားသည်။ Cluster regression analysis သည် ၇၇% အထီးနှင့်ယောက်ျား ၆၅ ရာခိုင်နှုန်းကိုရှင်းပြသည်။ ယောက်ျား၏လိင်စိတ်နိုးထမှုသည်အမျိုးသမီးသရုပ်ဆောင်၏ဆွဲဆောင်မှုအပေါ်တွင်မူတည်သည်၊ စိတ် ၀ င်စားသည်။ လေ့လာသူ။ ” အပြောင်းအလဲများအားလုံးထည့်သွင်းထားသောအမျိုးသမီးများအတွက်“ ပါဝင်သူတစ် ဦး အဖြစ်မိမိကိုယ်ကိုစိတ်ကူးယဉ်ခြင်း” သာလျှင်လိင်မှုနှိုးဆွမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုအထောက်အကူပြုသည်။ တွေ့ရှိချက်များအရလိင်သုတေသနတွင်ရုပ်ရှင်များကိုမည်သို့ရွေးချယ်သည်ကိုယောက်ျားနှင့်မိန်းမများတင်ပြသောလိင်မှုနှိုးဆွမှုအဆင့်ကိုခန့်မှန်းရာတွင်အရေးပါသောပြောင်းလဲမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။